အနုပညာလုပ်ငန်းများမှ အချိန်ကာလကြာမြင့်စွာ အနားယူခဲ့သော အနုပညာရှင်များ | News Bar Myanmar
အနုပညာလုပ်ငန်းများမှ အချိန်ကာလကြာမြင့်စွာ အနားယူခဲ့သော အနုပညာရှင်များ
ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ အနုပညာလောကဟာ အောင်မြင်သလောက် စိတ်ဖိစီးစရာ၊ စိတ်ညစ်စရာလည်းကောင်းလှပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် တောင်ကိုရီးယားအနုပညာရှင်များဟာ အနုပညာလုပ်ငန်းများမှ ခဏတာအနားယူလေ့ရှိကြပါတယ်။ သို့သော်လည်း အခုဖော်ပြမယ့် အနုပညာရှင်တွေကတော့ ခဏတာသာမဟုတ်ပဲ အချိန်အတော်ကြာ အနုပညာလုပ်ငန်းများကို ရပ်ဆိုင်းထားသူများဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပရိသတ်တွေ ထယ်စောက်လို့ လူပြောများကြတဲ့ Won Bin ကတော့ တောင်ကိုရီးယားရဲ့ ထိပ်တန်းမင်းသားတစ်လက်ပါ။ ကိုရီးယားရဲ့ ဂန္တဝင်ရုပ်ရှင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Man From Nowhere မှာလဲ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်လည်း Man From Nowhere ပြီးကတည်းကတော့ Won Bin ကို ရုပ်ရှင်တွေနဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာ မတွေ့ရတော့ပါဘူး။
၂၀၁၀ ကစလို့ ပရိသတ်တွေဟာ Won Bin ရဲ့ ရုပ်ရှင်သစ်၊ ဇာတ်လမ်းတွဲသစ်တွေကို မျှော်နေခဲ့သော်လည်း ခုထိတော့ မတွေ့ရသေးပါဘူး။ ဒီအနားယူတဲ့ကာလအတွင်းမှာတော့ Won Bin ကို ကြော်ညာရိုက်ကူးမှုတွေနဲ့သာ မြင်တွေ့နေရတာပါ။
Ko So Young ကတော့ ၁၉၉၀ ပွဲဦးထွက်မှစပြီး ၂၀၀၇ ခုနှစ်ထိ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုများ များစွာလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ၂၀၀၇ ခုနှစ် ကစပြီးတော့ ရိုက်ကူးတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေရဲ့ အောင်မြင်မှုနည်းပါးခြင်းကြောင့် အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကို ရပ်ဆိုင်းခဲ့ပါတယ်။
၁၀ နှစ်ကြာအနားယူပြီးနောက် Ko So Young ဟာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာတော့ Ms. Perfect နဲ့ ပရိသတ်တွေဆီကို ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ Ms. Perfect ပြီးတဲ့ ၂၀၁၇ ကနေ ယခုအချိန်ထိတော့ တဖန်ပြန်လည် အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို ရပ်တန့်ထားပြန်ပါတယ်။
Kim Hye Sung ကတော့ ဇာတ်လမ်းတွဲ တော်တော်များများရဲ့ ဇာတ်ပို့နေရာမှာ ပါဝင်ခဲ့တာပါ။ High Kick ရဲ့ ဇာတ်ပို့နေရာကတော့ အထင်ရှားဆုံးဖြစ်ပြီး မြန်မာပရိသတ်တွေလည်း သိကြမှာပါနော်။ သို့သော်လည်း ၂၀၁၇ ခုနှစ် Mad Dog ဇာတ်လမ်းတွဲပြီးကတည်းက Kim Hye Sung ဟာ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုများ ရပ်တန့်ကာ အနားယူနေခဲ့ပါတယ်။
Choi Min Yong ကတော့ သူ့ရဲ့ အနုပညာလောက စခဲ့တဲ့ အချိန်မှာတော့ သရုပ်ဆောင်လှုပ်ရှားမှုများစွာ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ၂၀၁၁ ခုနှစ် Life is Peachy ရုပ်ရှင်ဟာ သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံး ရုပ်ရှင်ပါ။ ၂၀၁၆ မှာ အနုပညာလောကကို ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခဲ့သော်လည်း Variety show တွေမှာပဲ တွေ့ရပါတော့တယ်။
Seo Ji Hee ကတော့ ကလေးသရုပ်ဆောင်အနေနဲ့ စတင်အနုပညာလှုပ်ရှားမှုများလုပ်ခဲ့ပီး ၂၀၀၄ မှ ၂၀၁၇ အထိ လှုပ်ရှားမှုများစွာလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ၂၀၁၇ မှစတင်ကာ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုများမှ အနားယူခဲ့ပြီး Between Friendship and Love ဇာတ်ကားဟာ သူမကိုကြည့်ရှုခဲ့ရတဲ့ နောက်ဆုံးဇာတ်ကားပါပဲ။
Next အဓိပ္ပါယ်မရှိဆုံး အကြောင်းအရာတွေနဲ့ Netizen တွေရဲ့ ဝေဖန်မှုတွေကို ခံခဲ့ရဖူးတဲ့ BTS အဖွဲ့ဝင်များ »
Previous « Seo Ji Hye နဲ့အလုပ်အတူတူလုပ်ရတဲ့ အတွေ့အကြုံကို ပြောပြလာတဲ့ Song Seung Heon